Ao amin'ny Fedora dia mikasa ny hanao fizarana izy ireo ary hanonona ny anarany hoe Fedora Linux | Avy amin'ny Linux
Ao amin'ny Fedora dia mikasa ny hanao fisarahana izy ireo ary hanonona ny anarany hoe Fedora Linux
Tsy isalasalana fa lNy mpamorona ny fizarana Fedora dia nanome zavatra betsaka horesahina hatramin'ny semester farany tamin'ny taon-dasa ary koa nandritra ny telo volana nitantana tamin'ity taona ity ary tsy tokony hatao ambanin-javatra ny ezaka nasehon'izy ireo hatramin'ny nanovana fanovana lehibe maro ho an'ity fizarana Linux malaza ity.
Ary amin'ity indray mitoraka ity dia tsy misy ankanavaka Misy zavatra manan-danja hitranga ao anatin'ny Fedora ary misy izany ny mpitarika ny tetik'asa tenany (Matthew Miller) iza nanambara fa nandray ny fandraisana andraikitra ny fizarana ny fiarahamonina Fedora sy ny anarana fizarana.
I mean, ao anatin'ny fanovana natolotr'i Matthew Miller eritreretina izany fizarana hoy amin'ny lafiny iray, ny anarana "Fedora" dia mifandray amin'ny tetikasa iray manontolo sy ny vondrom-piarahamonina mifandraika aminy ihany. raha amin'ny fizarana kosa dia kasaina hatao hoe Fedora Linux.
Marina fa ho an'ny maro dia mety tsy misolo tena raharaha lehibe izany raha ho an'ny faritra hafa amin'ny fiarahamonina dia tsy tian'izy ireo fotsiny io hetsika io (antenaina fa tsy hiteraka korontana izany noho ny tsy fahafaham-po sasany toy ny nitranga tamin'ny fizarana hafa), fa Ity fanovana ity dia ny fisainana mba ahafahana mampisaraka ny zavatra atao sy ny zavatra voakasik'izany.
Amin'ny teny hafa, ny anton'ny fanovana ny anarany no voatonona fa ny tetikasa Ny Fedora dia tsy ferana amin'ny fizarana iray ary koa mamorona ny tahiry EPEL ho an'ny RHEL / CentOS, antontan-taratasy, tranokala ary fitaovana isan-karazany. Noho izany, rehefa miteny aho hoe Fedora, te-hijery ny tetikasa iray manontolo aho fa tsy amin'ny iray amin'ireo vokatra noforonina.
Tao anatin'izany no nanambarany fa nataon'ny mpitarika ny tetikasa Fedora Voalaza fa ny fanovana anarana nangatahina dia natolotra ho an'ny Fedora kinova faha-35 izay hanolo ny masontsivana 'NAME = Fedora' ao amin'ny fisie / etc / os-release miaraka amin'ny 'NAME = »Fedora Linux»'.
Rehefa miresaka momba ny Tetikasa Fedora aho dia tiako holazaina aminao: ny fiarahamonina. Tsara ny fizarana Linux ataontsika, saingy ny fiarahamonina no lakileny. Rehefa miteny ny "Fedora" ny olona fa tsy manana mari-pahaizana dia tiako ny hieritreretan'izy ireo ny "Project Fedora" fa tsy ny sombin-kavoarintsika Ho fanampin'izany, mamorona zavatra mihoatra ny iray izahay: EPEL, ohatra, ankoatry ny kanto, antontan-taratasy, tranokala ary fitaovana izay tsy mifamatotra akaiky amin'ny rafitra fiasa mihitsy.
Nandritra ny taona maro dia tsy nanao asa lehibe izahay tamin'ny fametrahana an'io fanavahana io. Ankehitriny, ndao isika hahay fanahy iniana kokoa amin'ny fitenintsika.
Vao haingana aho no nangataka tamin'ny tonian-dahatsoratry ny magazine Fedora mba hanomboka hampiasa ny "Fedora Linux" amin'ny toerana izay itodihana ny rafitra fandidiana. Ohatra: "Mampiasa mycoolpackage amin'ny Fedora Linux" fa tsy "Mampiasa mycoolpackage amin'ny Fedora". Ny Manager Programme Fedora dia nanavao ny fandaharam-potoana sy ny modely fanolorana fanovana hampiasa ny "Fedora Linux" raha mety.
Ny masontsivana "ID = fedora" dia hijanona tsy miova, izany hoe tsy ilaina ny manova ny script sy ny block misy fepetra amin'ny rakitra famaritana.
Amin'ny lafiny fanontana manokana, ireo koa dia hanohy hozaraina amin'ny anarana taloha, toa ny Fedora Workstation, Fedora CoreOS ary ny Fedora KDE Plasma Desktop.
Ahoana ny amin'ny fanontana sy ny karazany hafa? Ampiasao hatrany ny "Fedora Araka ny efa ataontsika. Ohatra: "Fedora Workstation", fa tsy "Fedora Linux Workstation".
Ny hevitra mamaritra ny Fedora GNU + Linux fa tsy ny Fedora Linux dia tsy nahazo fanampiana, satria ny teny tsy ilaina dia manahirana ny mahatakatra azy ary na dia singa lehibe ao amin'ny Fedora Linux aza ny singa ao amin'ny tetikasa GNU dia tsy voafetra ho azy ireo ihany ny fizarana. ary misy fonosana maro hafa koa.
Ary koa, ny fampiasana ny teny hoe "Linux" ho an'ny fizarana dia efa nitazona ary nanjary teny eken'ny besinimaro.
Finalmente raha liana hahafantatra bebe kokoa momba izany ianao Momba ity vaovao ity dia azonao atao ny manamarina ny antsipiriany ao amin'ny bilaogy voalohany napetraky ny mpitarika ny tetikasa Fedora Ao amin'ity rohy manaraka ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Ao amin'ny Fedora dia mikasa ny hanao fisarahana izy ireo ary hanonona ny anarany hoe Fedora Linux
Nanolotra ny solomaso misy azy ny Facebook
Intel ao anaty olana indray, mahita ny fivoahan'ny data izy ireo